Talaabada 4: Jihaynta Dhaqameed (Barnaamijka Maraykanka ee Qorista Qaxootiga) - CORENav
Tlaabada Afraad: Tababarka Dhaqanka
Waqti kahor inta aadan uduulin Maraykanka, Xarunta Taageerada Dib udajinta ayaa sidoo kale kuubalaminaysa inaad kaqaybgasho casharo lagu baranaayo Jihaynta Dhaqanka halkaasoo lagugu siinaayo macluumaad muhiim ah uu ku saabsan safarka aad Maraykanka ku tagayso iyo waxa aad lakulmi doonto markaad gaarto.
Jihaynta Dhaqanka wuxuu kuudiyaarinayaa dib udajintaada asagoo casharo farsamo ah kaasiinaaya dhaqamada iyo sharciyada Maraykanka. Casharada Jihaynta Dhaqanku waxay kaa caawinayaan inaad hesho v aadna barato xirfadaha iyo fikradaha lagaa rabo inaad barato si aad ugu guulaysato deegaankaagaa cusub. USRAP waxay abuurtay manhaj loogu talagalay Jihaynta Dhaqanka ayadoo ku salaysan tobanaansano oo khibrad ah. Casharada Jihaynta Dhaqanka waxaa dhiga shaqaale kuhadla luqaddo badan, isirkodu kala duwanyahay kuwaasoo kaacaawinaaya inaad ka adkaato caqabadaha isdhexgalka waxayna jawaabo kaasiinayaan inta badan suaalaha aad kaqabi karto dib udajinta Maraykanka.
Maxaan filan karaa inta aan kujiro casharkayga Jihaynta Dhaqanka?
Kulanada tababarka Jihaynta Dhaqanka waxaa loogu talagalay inay kaa caawiyaan inaad laqabsato noloshaada cusub ee Maraykanka. Mawduucyada lagugu baraayo waxaa kamida:
Maxaa dhacaaya hadaanan kaqaybgali karin Jihaynta Dhaqanka?
Si aad uhesho faaiidada ugu badan, casharada Jihaynta Dhaqanka (CO) waxaa loosameeyay inaad noqoto ka qayb gale iyo dhegale. Waxaan si wayn ugu dhiiri galinaynaa in dhamaan xubnaha qoyska ee xaqa uleh ay kaqayb qaataan.
Waxaa jiro xiliyo aysan macquul ahayn inaad kaqaybgasho Jihaynta Dhaqanka (CO) Xaaladahaan markay jiraan, waxaa lagu siinayaa ayadoo qoraal ah si aad ula qabsato noloshaada Maraykanka. Waxaa lagaa doonayaa inaad dulmarto macluumaadka kahor inta aadan safrin. Waxaa lagugu siinayaa casharo dheeraad ah oo jihaynta Dhaqanka ah markaad tagto Maraykanka.